Qaabdhismeedka Kala Beddelka Heat 3-Side U ah
3-dhinac ku-beddelaha kuleylka nooca U-ga ah wuxuu si wax ku ool ah u adeegsadaa hawo-mareenka, wuxuu si buuxda u ballaariyaa aagga kala-wareejinta kuleylka wuxuuna si weyn u hagaajiyaa ku-wareejinta kuleylka iyada oo aan la kordhin qeybta booska.
Qaab dhismeedka is haysta, xoog sare, oo ku habboon rakibidda iyo dayactirka. Aluminium fin oo leh filim hydrophilic ah ayaa loo qaatay si loo hagaajiyo isku dheelitirka kuleylka ee filimka qoyan iyo guud ahaan isugeynta kuleylka ee cutubka.
Tuubbada Copper-ka oo leh tooth7.94 ilig sare iyo dun sare oo gudaha ah, xaddiga socodka dhexdhexaadka ah, is-weydaarsiga kuleylka iyo kala-soocidda waxqabadka dhammaystiran ayaa ugu fiican.
*Wakhtiga shidida / daminta
*Si otomaatig ah dib u bilow kadib markaad dib isugu xirto korantada
Naqshad casri ah oo leh laba dareemayaal heerkulka, mid ka mid ah hawo-soo-celinta, iyo mid ka mid ah guddiga xakamaynta,
si loo ogaado heerkulka gudaha ee hareeraha qolka, loona hubiyo in dabaysha kulul (kululaynta xilliga qaboobaha)
mode) waxaa loo diri lahaa gees walba oo qolka ah si isku mid ah.
Kuleylinta xilliga jiilaalka, marka AHU uu bilowdo, gariiradda-fin-ka ayaa la sii kululeyn doonaa ka hor intaanu fanku bilaaban; marka AHU ay ku jirto xaalad dhalaal, AHU taageere sahay ayaa istaagi doona; marka barafaynta dhammaato, ka
Coil-fin sidoo kale waa la sii kululayn doonaa ka hor intaan mar kale fanku bilaabin.
Hore: Kormeerka Tayada ee Nidaamka Chiller Chiller - LHVE Taxanaha Joogtada ah ee Magnet Isugeynta Iskucelcelinta Soo noqnoqoshada Iskuwareejinta Chiller - Airwoods
Noocyada Nabaad guurinta Qaybaha Qabashada Hawada